उपमेयर अमेरीका भाँसिएपछि खैलाबैला, विदेश भासिने सिलसिला यस्तो | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १२ माघ २०७६, आईतवार २०:२७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । कालिकोट तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर दन्ता नेपाली अमेरिकामा लुकेको खबर केही दिनअघि सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती भयो । तर, आइतबार उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफू त्यहाँ लुकेको नभई बिरामी परेकाले नेपाल फर्किन नसकेको दावी गरेकी छन् ।
उनको दाबीले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ । तर, उनको भनाइलाई पनि आँखा चिम्लेर पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । यसबारे सरकारले नै खोजीनिती गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, उपमेयरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति विदेशमा सम्पर्कविहीन बस्नु सामान्य विषय होइन । यसले देशकै प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउन सक्छ ।सीटी म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन (आईसीएमए) ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालबाट अमेरिका गएकी थिइन् । सो सम्मेलनमा उनीसँगै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना र नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटा पनि सहभागी भएका थिए ।
आईसीएमए विश्वभरका नगरपालिका व्यवस्थापकहरुको छात्रा संगठन हो । यसको वार्षिक सम्मेलन यसपाली अमेरिकाको दक्षिणी इलाकामा अवस्थित शहर टेन्नेसीमा अक्टोबर २० देखि २४ सम्म आयोजना भएको थियो । ढुंगाना र देवकोटा कात्तिक १ गते सँगै कोरिया हुँदै अमेरिका गएका थिए । उपमेयर दन्तालाई आफूहरुले त्यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुलाई राखिएको होटलमै भेटेको ढुंगानाले बताए ।
२०७४ साल वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट लडेकी थिइन् दन्ता । उनी कांग्रेसकी उम्मेदवारलाई हराउँदै उपमेयर बनेकी हुन् । दन्ताले एक हजार ८ सय ४३ भोट ल्याएकी थिइन् भने कांग्रेसकी लक्ष्मी शाही एक हजार २६ मत ल्याएर पराजित भइन् । मेयरमा निर्वाचित रतन शाही पनि माओवादी केन्द्रकै उम्मेदवार थिए ।
उपमेयरमा निर्वाचित भएयता उनको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नै रहेको मेयर शाही बताउँछन् । ‘उहाँ शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो तालमेल मिलेकै थियो,’ उनले भने ।
काठमाडौंको पद्मकन्या क्याम्पसबाट बीबीएस पास गरेकी दन्ता अविवाहित हुन् । १५ वर्षको उमेरदेखि उनी माओवादी राजनीतिमा लागेकी थिइन् । उनी केही समय जनयुद्धमा पनि संलग्न भएको भाई कविराजले बताए ।
‘यदि दिदीले अमेरिकामा सेटल हुन चाहेको भए त्यो भन्दा राम्रो मौका अरु कुन हुन सक्थ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘देशमै केही गर्छु भनेर उहाँले डीभीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाउनुभएन ।’
दन्ता हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नगर कमिटी सदस्य छिन् । उनले आईसीएमएको सम्मेलनका लागि अमेरिका जान पहिलोपटक एप्लाई गर्दा अमेरिकी दुतावासले भिसा दिएन । त्यसपछि उनले मन्त्रालयमा सोर्स लगाइन् । तत्कालिन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर परराष्ट्रमा पत्र पठाए । त्यही पत्रबमोजिम परराष्ट्रले अमेरिकी दूतावासमा सिफारिस गर्‍यो र बल्ल उनले भिसा पाइन् ।
नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव देवकोटासँग अमेरिकाको मल्टिपल भिसा भएकाले उनलाई समस्या थिएन । नीलकण्ठका मेयर ढुंगानासित भएको मल्टिपल भिसाको म्याद सकिएको थियो । उनले आवेदन गर्नासाथ भिसा पाएका थिए ।
दन्तासहित तीनैजना आफ्नै खर्चमा अमेरिका गएका हुन् । होटलमा बस्ने र खाने व्यवस्था चाहिँ आयोजकले मिलाएको थियो ।
ढुंगानाले भने, ‘जाने–आउने प्लेन टिकट हामीले आफ्नै खल्तिबाट व्यहोरेका हौं । सायद उहाँको पनि त्यही होला ।’
तिलागुफाका मेयर शाहीले पनि उपमेयरलाई अमेरिका पठाउन नगरपालिकाले कुनै खर्च नगरेको बताए ।
‘उहाँले हामीसँग सल्लाह गरेरै जानुभएको हो । तर, नगरपालिका संघले यस्तो भ्रमणमा नगरपालिकाहरुलाई भार नपार्ने भनेपछि उहाँहरु आफैंले खर्चको बन्दोबस्त गर्नुभयो, हाम्रो पैसा परेको छैन,’ उनले भने ।
आफ्नो स्टाटसमा दन्ताले लेखेकी छन्, ‘अमेरिका आउँदाको प्लेन टिकट पनि नगरले पैसा हालेको होइन । मैले पनि बारम्बार माग्नेजस्तो कति चोटि कल गर्नु ? मेयरलाई मेरो के मतलब र याद हुने कुरो पनि भएन र बारम्बार भिख मागिनँ । मैले सोचेँ, म बरु मर्छु, तर सरकारी पैसामा उपचार गर्दिनँ, माग्दिनँ पनि । मलाई मेरो प्लेन टिकटको पैसा त मेरो दाजुहरु पार्वतजी नेपाली/कालीप्रसाद पाण्डे दाजु, सुनिता पाण्डेले हाल्नुभएको हो । सरकारको सुका पैसा पनि मलाई चाहिएन भनेकै हो ।’
भाइ कविराजका अनुसार काठमाडौं बस्ने ठूलोबुबाका छोराहरु र केही साथीभाइले उनलाई सहयोग गरेका थिए । परिवारबाट पनि एक–डेढ लाख जुटाएको उनले बताए ।
कात्तिकदेखि अमेरिकामा रहे पनि हालै राष्ट्रिय सभा चुनावमा भोट हाल्नुपर्ने भएकाले बल्ल उनको खोजीनिति भएको थियो ।
तिलागुफाका मेयर शाही भन्छन्, ‘पार्टीबाट सोधखोज भएपछि मैले उहाँ डेढ महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको जानकारी गराएको हुँ । साथै पार्टीको नगर कमिटीले पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क नभएको जानकारी पार्टी केन्द्रलाई दिएको छ ।’
विदेश भासिने सिलसिला
जनतालाई विभिन्न वाचा गरेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आफैं विदेश भासिनु सामान्य कुरा होइन । देश बनाउँछु भन्नेहरु नै विदेश भासिन्छन् भने अरुले के रुँगेर बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यद्यपि, नेपालमा वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मले देश छोडेर पलायन भएका केही घटनाहरु छन् ।
०४८ सालका सिन्धुलीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रकाश कोइराला अमेरिका भासिए । उनको त्यहीँ मृत्यु भइसकेको छ । यसैगरी, सल्यानबाट ०५६ सालमा निर्वाचित राप्रपा सांसद नेत्रलाल श्रेष्ठ पनि अमेरिका पलायन भए । उनी त्यसबेला संसद विघटन भएपछि अमेरिका गएका थिए । तर, ०६३ सालमा संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि फर्किएनन् । अमेरिकाबाटै उनले राजीनामापत्र पठाएका थिए ।
०५१ सालमा सल्यानबाट जितेका एमाले सांसद नीलबहादुर तिलिजा अमेरिका पलायन भए । यद्यपि, उनी सांसदको कार्यकाल सकिएपछि अमेरिका गएका हुन् ।
केही समयअघि मात्रै खाँदबारी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बमबहादुर घले घरविदा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया गएका छन् । उनले देश छाडेको एक वर्षपछि मात्रै यो खबर सार्वजनिक भएको थियो । नगरपालिकामा उनले घरायशी कामका कारण बाहिर जानुपर्ने भएकाले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर चिठी बुझाएका थिए ।
हालै मात्र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष डीभी परेर अमेरिका भासिए । वडा सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर वडाध्यक्ष जगतमान घिसिङले गत चैत २७ गते सपरिवार देश छोडेका हुन् ।
अमेरिका उडेको पाँच महिनापछि मात्रै घिसिङले गाउँपालिकामा इमेलमार्फत राजीनामा पठाएका थिए । उनले समयमै हस्तलिखित राजीनामा नदिँदा उपनिर्वाचनसमेत हुन नसकेर सो वडा नेतृत्वविहीन बनेको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपाका घिसिङ ५४१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए ।
काठमाडौँ । अनिश्चयसँगै सुरु भएको थियो न्यायालयका निम्ति वर्ष २०७५ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलास न्यायाधीशबाटै अवरुद्ध, प्रधानन्यायाधीशको अस्वाभाविक…
बिरालो बलात्कार गर्ने नाङ्गै पक्राउ
काठमाडाैं । जताततै बलात्कारका घटनाले चर्चा पाइरहेको बेला दक्षिण अफ्रिकामा भएको बलात्कारको एक अनौठो मामला प्रकाशमा आएको छ ।…
काठमाण्डौं । काठमाण्डौं महानगरपालिकाले नगरवासीको चाहना र आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेन भनेर दिनदिनै आलोचना र विरोध भइरहँदा पनि…
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी उडानमा एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । वाइडबडीले…
१७ करोडमा सम्झौता, पाँच करोड भुक्तानी !
काठमाडौं । नेपालको संक्रमणलीन अवस्थामा प्रयोग भएका कार्यकारी अधिकार ब्रम्हलूट, भ्रष्टाचार र अनियमितताका पर्याय बन्न पुग्नु नौलो होइन् ।…